चिकित्सक भन्छन : प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने छैन – ईमेची डटकम
चिकित्सक भन्छन : प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने छैन
Posted byइमेची संवाददाता November 2, 2019 December 10, 2019 Leaveacomment on चिकित्सक भन्छन : प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने छैन
डा. चक्रराज पाण्डे: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो छ । उहाँको स्वास्थ्यका विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन । उहाँको डायलासिस डा. दिव्या सिंह शाहको लिडरसिपमा एउटा टिम बनाइएको छ । त्यसमा विभिन्न कुराहरुको विश्लेषण गर्दै प्रो.डा. दिव्या सिंहले निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँको निर्णय अनुसार कहिले गर्ने, कतिबेला गर्ने अथवा केही समय गर्नैनपर्ने हो कि भन्ने कुराको उहाँले नै निधो गर्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँको उपचार मेरो लिडरसिपमा ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलले गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे समाचारहरु म पनि धेरै पढ्छु । यी सबैलाई देख्दा म पनि छक्क पर्छु । रिपोर्ट आएको एउटा हुन्छ, लेखेको अर्कै हुन्छ । यसमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी भइराखेको देखेको छु, त्यसमा किन त्यस्तो भएको हो ? मलाई नै कन्फ्युजन छ । त्यसैले त्यस्ता हल्लाको पछि नलाग्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
उहाँ नियमित रुपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ । फेरि यो भनिरहँदा उहाँको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन भन्न खोजेको होइन । उहाँलाई रिएक्टिभेट हुनु, हेमोडायलसिस हुनु, उहाँ फेरि १२ वर्षदेखि बिरामी भएको, किड्नी ट्रान्प्लान्ट गरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, ती सबैका बाबजुद उहाँले जुन खालको उपचारमा बस्नुभयो, त्यही खानामा ध्यान दिनुभयो । यी सबै कुराले उहाँलाई एकदमै स्वस्थ बनाएको देखिन्छ ।
डायलसिसमा जुन खालको जनमानसमा सोचाइ छ । ओहो डायलसिस भयो, महिनामा यतिपल्ट, हप्तामा नै यतिपल्ट भन्ने जुनखालको अफवाह पैmलाइएको छ । त्यस्तो होइन, डायलसिस भनेको हामीले दिसापिसाव गरेजस्तै एउटा नियमित प्रक्रियामा सहयोग हो ।
डायलसिस गर्दै काम गरेको आधारमा उहाँलाई समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । म डाक्टर भएको हुनाले यसमा मेरो हेराइ फरक खालको छ । पदमा होस् या नहोस् कुनै पनि मान्छे कुनै पनि बेला बिरामी हुनसक्ने रियालिटी हामीले बुझ्नुपर्छ । हिजो दिउँसो साँझसम्मको कुरा गर्दा उहाँ नियमित काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । आफ्ना लिडरसिपलाई सल्लाह, सुझाव दिन सक्ने उहाँको मेन्टल र फिजिकल पावर पनि मैले देखेको छु । उहाँलाई मनोवल बढ्ने खालको वातावरण तयार गर्न सक्यौं भने हामी दिमागबाट नेगेटिप सोचाइ भागेर जान्छ । र, उहाँले देशलाई लिडरसिप जसरी दिइरहनुभएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
उहाँको स्वास्थ्यमा अन्य समस्या छैन । उहाँलाई डायलसिसबाहेक कुनै पनि समस्या छैन । डायलसिसपछि केही आराम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसपछि व्यायामको कुरा पनि आउँछ । यी सबै जीवनमा नियमित हुने कुरा हुन् ।
उहाँ देशको लिडरसिप भएकाले अब हिजोकोजस्तो काम गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने जनमानसमा जुन चिन्ता छ, त्यो गर्न म जरुरी देख्दिँन । भोलिको दिनमा डायलसिसपछि फेरि ट्रान्सप्लान्टकै कुरा आउँला त्यो फेरि मेरो काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो । जे–जति भनेपनि उहाँले लामो समय लिडरसिप दिन सक्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अरु पछि देखिने समस्याका बारेमा त उहाँको फिजिसिनहरुको एउटा टिम छ, त्यसले डिसिजन गर्ने कुरा हो । योभन्दा पनि जो उहाँको स्वास्थ्य हेरिरहनुभएको उहाँहरुले आवर टु आवर निगरानी राखिरहनुभएको थियो ।
उहाँलाई बालुवाटार, ग्रान्डी अथवा अन्य इन्टिच्युटमा गरेपनि मुख्य कुरा हामीले उपचार गर्दा हुने इफेक्सनका कुरालाई एकदमै निगरानीमा राख्नुपर्छ । जुन ठाउँमा उपचार गरिन्छ त्यहाँ जुनखालको वातावरणको तयारी गर्नेपर्ने हो, यो गर्नुपर्यो । यसमा दुईवटा कुरा हुन्छन्, एउटा विज्ञान, अर्को मान्छेको इमोसनल । त्यसबाहेक हल्लाखल्ला पैmलाएर मान्छेमा त्रास पैmलाइदिने यस्ता कुराहरु छन् । उहाँलाई मिडियाहरु झकझक्याएर धेरै थकित पनि बनाउँनुहुँदैन । यहाँ डायलसिस हजारौं मान्छेहरुको भइराखेको छ । त्यसकारण यसमा धेरै अप्ठ्यारो मान्ने पर्दैन । ग्रान्डीमै उहाँको लागि हामी विशेष कक्ष पनि बनाएका छौं । त्यहाँ एन्टिइन्फेक्सनको हरेक मेजरमेन्टहरु गरिएको छ । त्यसमा सेकेन्ड–सेकेन्डमा फलोअप गर्न सक्छन् ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उपचारका लागि सिंगापुर जानु पर्छ कि पर्दैन भन्ने छ, यसमा मेरो एकदमै ओपन माइन्ड छ । डिफ्रेन्ड कन्ट्रीहरुमा डिपे्रmन्डखालको पद्दति छ । सिंगापुरको एउटा नाम छ । उनीहरुको सेल्फकेयरमा लामो एक्सपेरियन्स छ । त्यसमा कुनै प्रश्न छैन । अब त्यस सवालमा त्यही लेबलको प्लस इमोसनल्ली हाम्रो प्राइमिनिस्टर भन्ने भावना पनि छ मनमा । त्यसले गर्दा सिंगापुरले दिनसक्ने उपचार नेपालमा पनि हुने वातावरण अहिले छ । उहाँको इभन ट्रान्सप्लान्टमासम्म पनि हामी त्यो लेभलमा छौं । होइन हामीले सिंगापुरलाई बढी सुरक्षित र फराकिलो वातावरण ठान्दछौं भन्दा पनि मेरो उहाँप्रति ठूलो सद्भाव छ । म उहाँलाई यहाँ जानुस्, त्यहाँ जानुस् भनेर कुनै सुझाव दिने पक्षमा छैन । जब जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला हामी एकदमै सावधानीपूर्वक गर्छौं । त्यसको लागि एकदमै सजकतापूर्वक यो कुरा दिइयो, अब यो दिन्छौं भनेर ध्यानका साथ गर्दछौं ।
(डा. चक्रराज पाण्डे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्योपचारमा संलग्न चिकित्सक हुन् । यो लेख उनीसँग ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसमा लिएको अन्तवार्तामा आधारित हो)
Posted byइमेची संवाददाता November 2, 2019 December 10, 2019 Posted inसमाचार
कुन राशिका व्यक्तिले कस्तो ‘पर्स’ बोक्दा फलिफाप हुन्छ ?